Puntland iyo Jubbaland oo Shir Deg-deg ah ku Baaqay oo ka dhacaya Magaalada… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland aya saqdii dhexe ee xalay War-saxaafadeed wadajir ah kasoo saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo muranka weli ka taagan qabsoomida doorashada ka dhaceysa Soomaaliya.
War-saxaafadeedka ay soo saareen Axmed Madoobe iyo Saciid Deni aya waxaa lagu sheegay in la fulin waayay heshiiskii 117-kii Bishii September Magaalada Muqdisho looga gaaray doorashada, uuna hareeyay khilaaf xoogan, taasina ay keentay in labada maamul ay dib u dhigaan magacaabista Guddiyadii doorashada ee laga sugayay.
Sidoo kale Jubbaland iyo Puntland ayaa caddeeyay in Wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya James Swan uu qaatay door muhiim ah oo ku aadan sidii Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamulada ay shir isugu imaan lahaayeen, loona xalin lahaa khilaafka taagan.
Sidoo kale labada maamul ayaa Madaxda dowladda iyo kuwa maamul Goboleedyada ugu baaqay inay shir deg deg ah isugu yimaadaan 30-ka bishaan Magaalada Muqdisho, si loo xaliyo caqabadaha ku hortaagan qabsoomida doorashada.
Puntland iyo Jubbaland ayaa Beesha Caalamka ugu baaqay inay gacan ka geysato sidii dalka Soomaaliya looga badbaadan lahaa khatar amni iyo xasillooni darro siyaasadeed oo dhacda markii la gaaro 8-da February, iyadoo aan heshiis laga gaarin doorashada.